Heshiisyada tiknoolajiyada ugu fiican ee 11.11 ee AliExpress | Androidsis
Shiinaha gudahiisa malaha Jimco Madoow, laakiin waxaa jira Maalin Kali ah. 11-ka Nofeembar, waxaa la xusaa maalinta kali-kali, maalin u dhiganta Jimcaha Madow ee Shiinaha, halkaas oo kan dambe aan laga xusin. Intii lagu gudajiray dabaaldega Maalinta Singles waxaan heli karnaa tiro elektiroonig ah oo leh qiimo dhimis ballaaran.
Haddii aad ka fekereyso inaad cusbooneysiiso taleefankaaga casriga ah, inaad iibsato jijin tiris ah ama aad soo gasho adduunka smartwatches, waxaan kugu martiqaadayaa inaad fiiriso dhammaan dalabyada aan hoos ku tusnay Waxyaabaha laga yaabo inaan laga helin Jimcaha soo socda ee Madow.
Dhammaan dalabyada aan hoos ku tusi karno waxay ka socdaan AliExpress, Shiinaha Shiinaha ee sanadihii la soo dhaafay wuxuu noqday il muhiim u ah wax soo saarka qof walba, ma ahan oo keliya Spain iyo halka aan ka awoodno taleefannada casriga ah, jijimooyinka quantifier, samaacadaha dhagaha, baytariyada dib loo soo celin karo iyo xitaa miisaanka.
1 Xiaomi Mi Band 4 oo ah 23,99 euro
2 Xiaomi Redmi Xusuusin 8 Pro oo loogu talagalay 227 euro
3 Xiaomi router 13,71 euro
4 Xiaomi Mi 9T oo ah 324 euro
5 Amazfit GTS oo ah 138 euro
6 Amazfit Bip Lite oo ah 50,65 euro
7 Xiaomi AirDots sameecadaha dhagaha ee 16,99 euro
8 Sanduuqgeyga S oo ah 85,48 euro
9 Bangiga Xiaomi Power Bank 20.o00 mAh oo ah 20,99 euro
10 Miisaanka Jidhkayga Qaab dhismeedka 2 oo ah 21,41 euro
Xiaomi Mi Band 4 oo ah 23,99 euro
Wax yar ama waxba waa inaan ka hadalnaa mid ka mid ah jijimooyinka ugu iibka badan adduunka, jijimad gaadhay jiilka afraad oo ay ku cusub tahay ku dar shaashad midab leh. Jijimadani waxay noo oggolaaneysaa inaan qiyaasno waxqabadkeenna isboorti iyo sidoo kale inaan kormeerno hurdada. Dhammaan macluumaadkaan waxaa lagu heli karaa barnaamijka Mi Fit, oo ah codsi aan si bilaash ah uga soo dejisan karno Google Play Store.
Iibso Xiaomi Mi Band 4
Xiaomi Redmi Xusuusin 8 Pro oo loogu talagalay 227 euro
Xiaomi Redmi Note 8 Pro wuxuu na siinayaa a Shaashad 6,53-inji ah oo leh dhibco u eg qaab biyo ah. Shaashadu waxay gaadhaysa xallinta 2340 × 1080 FullHD + iyo iftiinka ugu sarreeya ee 500 nits. Terminalkan gudihiisa, Xiaomi waxay dooratay processor-ka MediaTek Helip G90T, oo ah processor 8-core ah oo ay wehliyaan sawirada Mali G76, 6 GB oo RAM ah iyo 64 GB oo ah keydinta UFS 2.1.
Iibso Xiaomi Redmi Note 8
Xiaomi router 13,71 euro
Hadaad leedahay dhibaatooyinka cilaaqaadka Wi-Fi ee gurigaaga ama meheraddaada, waxa ugu fiican ee aad sameyn kartid waa inaad kudarto Wi-Fi router modemka aad ku haysato guriga, modem kaas oo badanaa bixiya caymis aad u liita. Xiaomi router wuxuu na siiyaa illaa 300 Mbps iyada oo ay ugu mahadcelinayaan labada anteeno ee dibedda ah ee ballaarinaya daboolka calaamadaha Wi-Fi ee gurigeenna.
Waxay u oggolaaneysaa isku xirnaansho isku mid ah illaa 64 qalab, markaa waxaan sidoo kale uga faa'iideysan karnaa ganacsigeenna, gaar ahaan haddii ay tahay baarar, makhaayad ama maqaaxi, halkaasoo tirada isku xirnaanta wadajirka ah ay dhibaato ku noqon karto routerka ama modemka aan haysano.
Iibso Xiaomi Router
Xiaomi Mi 9T oo ah 324 euro
Mid ka mid ah taleefannada casriga ah ee ugu dhameystiran ee aan hadda ka heli karno suuqa, Xiaomi ayaa na siineysa, mar kale Mi 9T, taleefannada casriga ah ee isku xira Shaashad 6,39-inji ah oo leh shaashadda AMOLED, Xallinta Full HD + iyo isku-darka akhristaha sawirka hoose Oo isku mid ah. Gudaha waxaa maamula Snapdragon 730 oo ay soo saartay shirkadda Qualcomm oo ay weheliso 6 GB RAM iyo 128 GB oo keyd ah.
Dhanka dambe, waxaan ka helnaa mid ka mid ah meelaha ugu soo jiidashada badan: kaamirooyinka. Xiaomi Mi 9T wuxuu na siinayaa dhowr kamaradood oo 3 ah, midka ugu weyna waa 48 mpx oo ay soo saartay Samsung. Kaamirada hore ma ahan qaab u eg ama dhibic biyo ah, laakiin waxay ku taal cirifka kore ee shaashadda iyo u muuqataa oo ku baaba'aa iyada oo loo marayo a pop-up. Kaamiradani waxay gaareysaa 20 mpx.
Amazfit GTS oo ah 138 euro
Huami Amazfit GTS gadaashiisa waa Xiaomi, in kasta oo aanu toos u ahayn, maaddaama shirkaddani ay ka mid tahay kumanaanka ay Xiaomi ku leedahay deegaankeeda. Amazfit GTS waxay na siisaa a naqshadeynta oo aad ugu eg Apple Watch, labadaba bilic ahaan iyo heer software ahaanba. Waxaa lagu heli karaa midabbo kala duwan oo ah labada sanduuq iyo suumanka.
Is-maamul, sida uu sheegayo soo-saaraha, wuxuu gaaraa 14 maalmoodWaa 5 ATM biyo u adkaysata waxayna leedahay 12 nooc oo isboorti si loo qiyaaso dhaqdhaqaaqa isboorti ee aan qabanno. Haddii aad raadineysid saacad wanaagsan, fiican oo raqiis ah, Amazfit GTS ayaa laga yaabaa inay tahay smartwatch oo ku habboon inta badan jeebkaaga.
Iibso Amazfit GTS
Amazfit Bip Lite oo ah 50,65 euro
Laakiin haddii aadan rabin inaad lacag badan ku bixiso smartwatch, Huani sidoo kale wuxuu na siiyaa nooc ka jaban: Amazfit Bit Lite, oo ah nooc aan ka heli karno wax ka yar 50 euro oo ku siinaya ilaa 45 maalmood oo batari ah marka lagu daro inaad biyo u adkeysato ilaa 3 ATM. Sida qaabka 'GTS', 'Bit Lite' wuxuu noo ogolaanayaa inaan la soconno dhaqdhaqaaqa jirkeena marwalba wuxuuna mas'uul ka yahay la socodka heerka garaaca wadnahayaga 24 saac maalintii.
Iibso Amazfit Bip Lite
Xiaomi AirDots sameecadaha dhagaha ee 16,99 euro
Haddii aad raadineyso headphones wireless ah oo raqiis ah oo tayo leh, markale waa inaan u leexanaa Xiaomi. Iyada oo AirDots ah, waxaan haynaa sameecadaha dhagaha ee wireless-ka leh IPX 4 ilaalinta oo u dhigma labada macruufka iyo Android-ka, oo leh Bluetooth 5.0 isku xirnaan iyo ismaamul ilaa 4 saacadood ah, oo aan ku dheereyn karno illaa 12 saacadood adoo adeegsanaya kiiska lacag bixinta
Si ka duwan moodooyinka kale ee laga heli karo suuqa, AirDots waa kuwo caqli badan oo aan soo jiidanaynin dareen gaar ah. Intaas waxaa sii dheer, sameecadaha dhagaha lafteeda waxaan ka soo wici karnaa labada caawiye ee Google iyo Siri labadaba, sidaa darteed marka la eego howlaha waa in ka badan inta ku filan.
Iibso Xiaomi AirDots
Sanduuqgeyga S oo ah 85,48 euro
Haddii nidaamka qalliinka ee telefishankaagu yahay kan ugu xun ee hadda suuqa ku jira ama aanad haysan TV caqli badan, Xiaomi waxay na siisaa Mi Box S, sanduuq sare oo kuu oggolaanaya TV-gii hore nooga dhig caqli si loo helo adeegyo kala duwan oo fiidiyoow ah oo fiidiyoow ah oo hadda laga heli karo suuqa, ha ahaato Netflix, HBO, Amazon Prime, Hulu ...
Gudaha Mi Box S waxaan ka helnaa Android 8.1. Thanks to 4-core processor iyo 2 GB oo RAM ah, waan awoodnaa ku ciyaar fiidiyowyo 4k tayo leh adigoon ruxmayn ama aan wax dhibaato ah soo gaadhin isku dayga. Waxay leedahay isku xirka 2aad ee HDMI iyo dekedda 2aad ee USB ee isku xirka labada darawal adag iyo ulaha USB.
Iibso Xiaomi Mi Box S
Bangiga Xiaomi Power Bank 20.o00 mAh oo ah 20,99 euro
Haddii batteriga taleefankaaga casriga ahi aanu kuu oggolaanayn inaad maalinta si habboon u dhammaysato, ama aad caadi ahaan u baxdo dhammaadka usbuuca oo aad rabto iska ilow xeedhoHal ikhtiyaar in la tixgeliyo waa batari dib loo soo celin karo. Bangiga Awoodda ee Xiaomi wuxuu na siiyaa awood ah 20.000 mAh oo aan ku qaadi karno labadaba iphone-ka iyo kaniiniga ama kamaradda marar kala duwan.
Bangiga Awoodda ee Xiaomi
Miisaanka Jidhkayga Qaab dhismeedka 2 oo ah 21,41 euro
Kirismaska ​​ayaa loo dabaaldegaa bisha soo socota. Haddii aan rabno dhar inay ku habboon yihiin ka hor iyo gaar ahaan xafladaha ka dib, waa inaan bilowno xakameynta culeyskeena. Xiaomi waxay noo siineysaa kiiskan Mi Body Composition, oo ah miis noo ogolaanaya inaan xakameyno maxbuuskeena iyo dufanka jirkeena marwalba.
Iibso Qaybta Jirkeyga 2
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Xiaomi » Heshiisyada tiknoolajiyada ugu fiican ee 11.11 ee AliExpress
Surfshark: VPN-ka ugu Fiican ee Loo Adeegsado Android